Nabad-Sugidda oo arrin laga naxo ku kacday.!!!! - Caasimada Online
Home Warar Nabad-Sugidda oo arrin laga naxo ku kacday.!!!!
Nabad-Sugidda oo arrin laga naxo ku kacday.!!!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Hay’adda Nabadsugidda Qaranka ayaa u digtay dadka Soomaaliyeed iyo dhinacyada siyaasadda inay uga faa’iideysan qaab siyaasadeed shilkii askari ka tirsan AMISOM ku dilay wiil yar oo 14 jir ah dhowaan agagaarka Stadio Muqdisho.
War NISA ay ku qortay Boggeeda twitterka ayay ku sheegay in saraakiil ka tirsan Nabadsugidda ay booqdeen qoyska uu ka dhintay wiilka yar ayna u baahan yihiin duco ee aysan u baahayn in la siyaasadeeyo arrintooda.
Warka NISA aya ka danbeeyay banaanbax xisbiga Daljir soo abaabulay oo ka dhacay Muqdisho, kaasoo looga horjeeday dilka AMISOM kula kacdo dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed ee aan wax tallaabo ah dowladdu ka qaadin.
Warka kooban ee NISA ma sheegin wax tallaabo ah oo ay qaadeyso si arrinta dilka wiilka 14 sano jir ah wax looga qabto, mana faahfaahin tallaabada xigta ee ka dambeysa kulanka ay la qaatay qoyska wiilka dhintay, waxaase cad inay diidan tahay bannaanbaxa.